नेपालमा करिब ३० प्रतिशत वयस्कमा उच्च रक्तचाप #BloodPressure • Health News Nepal
नेपालमा करिव ३० प्रतिसत बयस्कमा उच्च रक्तचापको समस्या रहेको देखिएको छ । उच्च रक्तचापलाई मुटु रोगको प्रमुख कारक मानिन्छ । नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानका अनुसार हाल नेपालमा कूल जनसख्ंयाको ३० प्रतिसत बयस्कमा उच्च रक्तचापको समस्या छ । त्यसैगरि जनसंख्याको २५ प्रतिसत अर्थात करिव ७५ लाख जनतामा कुनै न कुनै प्रकारको मुटुरोग रहेको अनुमान गरिएको छ । २० प्रतिशतलाई कालेस्टेरोलको समस्या, १० प्रतिशतलाई मधुमेह र एक प्रतिशत बालबालिकालाई बाथ–मुटु रोग छ ।
Dr Prakash Raj Regmi Consultant Cardiologist
नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानका महासचिव एवं वरिष्ठ मुटुरोग विज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार वर्षेनी १००० बालबालिका बाथ–मुटुरोगका कारण हार्ट फेल भएर मृत्युको मुखमा पर्ने गरेका छन । डा. रेग्मीका अनुसार बच्चा जन्माउने बेलामा धेरै महिलाहरुको पनिबाथ–मुटुरोग कै कारण मृत्यु भैराखेको छ । पछिल्ला वर्षमा मुटु रोगको समस्या बढ्नुको कारण खानपान र अव्यवस्थित जिवनशैली प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरु बताउछन । डा. रेग्मीका अनुसार ९० प्रतिशत नेपालीले मुटुमैत्री खाना खाँदैनन् । करिब ५० प्रतिशत सहरिया नेपालीले आवश्यक व्यायाम गर्दैनन् । ४० प्रतिशतले चुरोट, सुर्ति सेवन गर्छन् ।
धेरै नेपालीलाई मानसिक तनाव छ । एकातिर खानामा अत्याधिक चिल्लो, गुलियो र नुनको मात्रा बढीे छ, हरियो सागपात, फलफूल आदि कम छ । चुरोट, सुर्तीको सेवनबढी छ, रक्सी पिउने बानी धेरैको भएकाले समस्या थपिदै गएको विज्ञहरुको दावी छ । अस्वस्थकर जीवनशैलीलाई स्वस्थकर बनाउने तर्फ कदमचाल्नु नै मुटुरोगबाट बच्ने सबै सबैभन्दा सरल र उत्तम उपाय भएको उनीहरुको सुझाउ छ । यस कारण मुटु बचाउन सबैले आफ्नो मन लगाउन पर्छ । मन लगाउने भनेको तन, मन, धन, विवेक, बुद्धि आदि सबैको प्रयोग मुटु बचाउनकालागि गर्ने भनेको हो । यसै गरि ‘ मन लगाउ, मुटु बचाउ ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व मुटु दिवस मनाइदै छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि यो दिवस मनाइदै छ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २९का दिन विश्व मुटु दिवस मनाइन्छ ।
रक्तचापबारे जानकारी: डा.ओममूर्ति अनिल
विश्वमा बर्षेनी १ करोड ८० लाख मानिसहरु मुटुको रोगका कारण मर्ने गर्दछन् । यस मध्ये विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा मुटु रोगबाट मर्नेहरुको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न आउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०३० सम्ममा मुटु रोगबाट विश्वभर मर्नेहरुको संख्या वर्षेनी २ करोड ५० लाख पुग्ने अनुमान छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा आज हृदयघातका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २५ प्रतिसत छ भने सन् २०३० सम्ममा यो संख्या बढेर ३५ प्रतिसत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
✍ डा.प्रकाश राज रेग्मी, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ (Dr Prakash Raj Regmi, Consultant Cardiologist)
Tags: Blood PressureDr Prakash Raj RegmiHeart Health
दसैं र कोरोनामा मुटु रोगीले किन बढी सचेत हुनुपर्छ?
Pingback: मधुमेह सम्बन्धि जान्नैपर्ने १५ कुरा - डा भोज राज अधिकारी #diabetes • Health News Nepal
Pingback: मृगौला रोगको निदान र उपचारमा न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाको भूमिका • Health News Nepal
स्वास्थ्यमन्त्रीमा हृदयेस त्रिपाठीको जिम्मेवारी अरु मन्त्रीहरुको पनि हेरफेर #Healthministry
कस्ता कस्ता समस्याहरु भएकाले कोभिड बिरुद्धको खोप लगाउन हुँदैन (हेर्नुहोस् विस्तृतमा) #HealthProblem